Riwaayado suugaaneed: taariikh-nololeedyo, taariikh nololeedyo iyo sawirro nololeed | Bezzia
Warar suugaaneed: taariikh nololeedyo, taariikh nololeedyo iyo sawirro nololeed
Maria vazquez | 29/04/2021 12:00 | Wararka, dhaqanka
Taariikh nololeedyo, taariikh nololeedyo iyo xusuus qoryo Waxay na gashadaan sawirro qoys oo aan had iyo jeer kaamil ahayn, itaal darrada iyo silica dadka, caadooyinka maxalliga ah iyo dhaqammadii hore ee waddanku lahaa… Sidaas awgeed, waxaannu ogaaneynaa halyeeyo aad u kala duwan oo aannu moodaynay inaynu naqaannay oo aanaan ogayn.
Waxaan soo safarnay buugaagta daabacadaha kala duwan raadinta sheekooyin suugaaneed oo ku habboon qaybtaan waxaanan ka helnay kuwa badan oo aan soo jeedin karno. Iyagu dhammaantood ma ahan waxa ay yihiin, laakiin haddii la metelay, ama sidaa darteed waxaan isku daynay, xasaasiyad iyo mowduucyo kala duwan.
1 Beertayda weli uma sheegin
2 Hooyo Ireland
3 Aabbahay iyo matxafkiisii
4 Svetlana Geier, nolol u dhaxaysa afafka
Beertayda weli uma sheegin
Qore: Pia Pera
Daabacaha: Errata Naturae
Beer qurux badan oo ku taal Tuscany: xamaasad, waxbarasho, goob iska caabin ah. Sidoo kale riyo, taas oo qoraa Pia Pera ay awood u yeelatay inay ku fuliso mahadnaq beero laga tagay: waxay hagaajisay qolkii oo u rogtay guri ay ka buuxaan buugaag, rinjiyeyn iyo alaab guri; si kastaba ha noqotee, wuxuu si dhib yar u dhexgalay beerta miraha ah ee ku hareeraysan, oo ay ka buuxaan geedo yaryar oo duurjoog ah oo u socdaalay halkaas oo ay ugu mahadcelinayaan dabaysha iyo shimbiraha. Boqolaal nooc oo ubaxyo ah, geedo iyo khudaar ayaa siisay muuqaal hawleed oo ay soo dalbadeen dhowr wadiiqo.
Maalin maalmaha ka mid ah, ayuu qoraagu taas ogaaday cudur aan dawo lahayn ayaa si tartiib tartiib ah u qaada. Wajahay nabaad-guurka jidhkiisa, si tartiib tartiib ah ayuu ugu xanibmay dhaqaaq la’aanta geedka, beerta, meeshaas oo ay noloshu ka soobaxdo iyo halka “soo nooleynta” ay ka dhacdo, ayaa magangal u noqota. Intaad ka fikirayso, waxaad abuuraysaa dammaanad cusub oo dabiiciyan ah waxaadna siisaa fikrad iyo feker dhaqdhaqaaq leh oo ku saabsan macnaha nolosha. Qoraaga ayaa dhageysata oo dhageysata nafteeda, waxayna sheegtaa waxa dhaca booqashooyinka ay ku booqaneyso isbitaalka, fikradaha ku habsada habeenka, marinnada la socda ee ku qalbi qaboojiya ... Jooji dareenka xiisaha iyo u jilicsanaanta wax kasta oo hareeraheeda ku xeeran oo had iyo jeer qurxin jiray jiritaankeeda: maahan oo keliya ubaxyada iyo shimbiraha beerteeda ku badan, laakiin sidoo kale shirkadda eeyadeeda, asxaabteeda, buugaagteeda, gastronomy ... «Hadda wax waliba waa qurux saafi ah oo fudud », ayaa na kashifaya.
Qore: Edna O'Brien
Ireland waligeed waxay ahayd naag, uur, god, lo ', Rosaleen, beero, gabar saaxiib ah, dhillo ...
Qoraaga abaalmarinta ku guuleystay ee Gabdhaha Waddanka waxay xireysaa taariikh-nololeedkeeda - carruurnimadeedii degmada Clare, maalmaheedii dugsiga nun, dhunkashadeedii ugu horreysay, ama duulimaadkeedii Ingiriiska - iyadoo nuxurkeedu yahay Ireland, oo ah dhul quraafaad ah, gabayo, khuraafaad, qadiim ah caadooyinka, murti caan ah iyo qurux xad dhaaf ah. Hooyada Ireland waa sida uu qabo The Guardian, “Edna O'Brien sida ugu fiican. Xisaab kicis iyo xarrago leh deegaan dabiici ah iyo kuwa ku dhex nool, oo ay ka buuxaan geesinnimo iyo xariifnimo.
Aabbahay iyo matxafkiisii
Qore: Marina Tsvietáieva
Marina Tsvetaeva waxay qortay akoonkan taariikh nololeedka ah markii ay masaafuriska ku jirtay Faransiiska waxayna ku daabacday Ruushka, 1933, joornaallo kala duwan oo ku yaal Paris; seddex sano ka dib, 1936, isagoo isku dayaya inuu u dhowaado akhristayaasha Faransiiska, wuxuu dib uga shaqeeyay xusuustiisii ​​carruurnimada ee Faransiiska, oo ka kooban shan cutub oo uu ugu magac daray Aabahay iyo matxafkiisa oo waligoodna aan la daabicin inta uu nool yahay. Labada noocba ee lagu soo ururiyey muggan qoraagu wuxuu bixiyaa a dareen shucuur iyo gabay ah oo ku saabsan sawirka aabihiis, Ivan Tsvetaev, bare jaamacadeed oo noloshiisa u huray aasaaskii Matxafkii Moscow ee Farshaxanka Fiican, Matxafka Pushkin ee hadda jira. Badanaa laconic iyo fragmenting laakiin leh awood maanso oo aan caadi ahayn, qoraalkan cajiibka ah, firfircoon iyo dhaqdhaqaaqa, wuxuu nagu soo dhaweynayaa isku dhawaanshaha gabay aan la koobi karin marka loo eego kuwa kale.
Svetlana Geier, nolol u dhaxaysa afafka
Qore: Taja Gut
Daabacaha: Tres Hermanas
Haddii noloshu u qalanto u qalmidda "jacayl" waa tan turjubaanka Svetlana Geier. Waxay ku dhalatay magaalada Kiev sanadkii 1923, waxay yaraanteedii kusoo dhex qaadatay qaar ka mid ah indheer garadka ugu caansan dalkeeda. Nadiifinta Stalinist waxay soo afjartay noloshi aabihiis, markii dambena, intii lagu jiray gumeysigii Jarmalka, wuxuu goobjoog u ahaa bahalnimada Nazi ee nooca ugu dhiig badan. Waad ku mahadsan tahay caqligeeda iyo wadisteeda muhiimka ah ee aan caadiga ahayn, Geier wuxuu hadhow noqon doonaa tarjumaha ugu xariifsan suugaanta Ruushka illaa Jarmalka qarnigii XNUMXaad. Tarjumaad cusub oo ka mid ah shantii sheeko ee ugu weyneyd ee Dostoevsky waxay ahayd hawsha titanic ee uu ku caleemo saaray nolol u adeegid tarjumaadda iyo suugaanta. Taariikh nololeed qurux badan oo ay ku jiraan wareysiyo dhowr ah oo tifaftiraha iyo turjubaanka Taja Gut ay la sameeyeen Svetlana Geier intii u dhaxeysay 1986 iyo 2007.
Qore: Emmanuel Carrère
Yoga waa sheeko ku saabsan qofka ugu horeeya oo aan wax qarin ah ka mid ah niyad jab qoto dheer oo leh ujeedo is dilid ah taas oo keentay in qoraaga isbitaal la dhigo, lagana helo cudurka laba-cirifoodka isla markaana la daaweeyo muddo afar bilood ah. Sidoo kale waa buug ka hadlaya dhibaatada cilaaqaadka, oo ku saabsan burburka shucuurta iyo cawaaqibkiisa. Iyo ku saabsan argagixisada islaamiyiinta iyo riwaayaddii qaxootiga. Iyo haa, hab waliba oo ku saabsan yoga, oo qoraagu ku tababbaranayay labaatan sano.
Akhristaha ayaa gacmihiisa ku haya qoraal uu Emmanuel Carrère ku qoray Emmanuel Carrère oo u qoran qaabkii Emmanuel Carrère. Taasi waa, iyada oo aan lahayn xeerar, ku boodboodaya bannaanka shabaq la'aan. Waqti dheer ka hor qoraagu wuxuu go'aansaday inuu ka tago mala-awaalka iyo miisaanka noocyada. Iyo shaqadan naxdinta leh iyo isla waqtigaas shucuurta qalbi jabka leh, taariikh nololeedka, qoraalada iyo taariikh nololeedka suxufiga ayaa is dhexgala. Carrère wuxuu ka hadlayaa naftiisa oo hal talaabo dheeraad ah ayuu uga sii qaadanayaa baadhitaankiisa xadka suugaanta.
Waa kuwee taariikh-nololeedyadan keebaad akhrin doontaa marka hore? Weli ma akhriday? Waan cadahay inaan ku bilaabi doono "wali uma sheegin beertayda", laakiin ma garanayo taariikh nololeedka kale ee aan raaci doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Warar suugaaneed: taariikh nololeedyo, taariikh nololeedyo iyo sawirro nololeed
Ku abaabulo gurigaaga habka 20/10, ogow waxa uu ka kooban yahay